Oge Quaternary: ihe ọ bụla ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ederede gara aga anyị enyochala otu o si arụ ọrụ geological oge ma nyochaa ihe ndị kachasị mkpa mere na oge Mesozoic na na Aeon na-aga n'ihu. Taa anyị laghachi Oge Cenozoic nke anyi gha enyocha ihe na eme oge Quaternary. Ọ bụ maka oge ikpeazụ nke Cenozoic Era na nke gụnyere abụọ n'ime oge "ọhụụ", Pleistocene na Holocene.
You chọrọ ịmata ihe ndị kacha mkpa mere na oge a? Nọgide na-agụ n’ihi na anyị na-agwa gị ihe niile.
1 Mbata nke akpụrụ na mmadụ
2 Njirimara Pleistocene
3 Ihe oriri, osisi na osisi
4 Ntughari mmadu na nke ndi mmadu
Mbata nke akpụrụ na mmadụ
Mgbe ọtụtụ nde afọ gachara, anyị ga-abịarukwu nso ihe dị ugbu a. Na Quaternary, nke malitere afọ 2,59 gara aga, bụ oge anyị nọ taa. Quaternary abụghị naanị Pleistocene na Holocene, mana maka nkwekọ mgbe ị na-eme nchọpụta banyere mgbanwe mere na ụwa, afọ Gelasia nwere ike ịgụnye. N’oge a enwere mgbanwe dị oke mkpa na ndụ na mbara ala, ihu igwe na oke osimiri n’ihi usoro oge ice.
Oge abụọ nke Quaternary bụ Pleistocene na Holocene. Pleistocene kachasị ogologo ma gụnye ọtụtụ narị afọ na narị afọ nke glaciers. A maara ya dị ka Oge akpụrụ. Ga na nso nso a anyị nwere Holocene, nke a na-ewere dị ka akụkụ post-glacial na nke ahụ bụ ihe anyị nwere taa.
Mgbe a na-ekwu maka Pleistocene, ọtụtụ mmadụ na-ekwu maka ya "Oge nke mmadụ" ebe obu na genos Homo malitere imeghari n’oge a. Ọ bụ ugbua mgbe na Holocene, mmadụ nwere ike ịzụlite ndụ a haziri ahazi na otu mmekọrịta na nke a na-akpọ mmepeanya.
Anyi ga ebido site na ikowa Quaternary nke ya na mbu. Afọ 2,59 gara aga na-enye mmalite nke Pleistocene nke gwụsịrị naanị afọ 12.000 gara aga. N'oge a na akpụrụ gbasara n'ụdị glaciers ruo mgbe biri ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke elu ụwa. Ice rutere n’ebe ndị ọ na-erubeghị. Ma ọ bụ na mgbe anyị na-ekwu maka glaciation ma ọ bụ oge ice, ihe a na-eche na ụwa niile bụ ice, tinyere oke osimiri. Nke a adịghị ka nke a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25% nke ụwa niile kpuchiri ice bụ ihe na-adịghị mma.
N'ihi oke ice na ụwa, oke osimiri dara na 100 mita na ndụ na mbara ala ga-emegharị maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ ma ọ bụ pụọ. N’ebe enweghị ice, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osisi na ahịhịa na-adịkarị otu oge gara aga (Pliocene).
Enwere nnukwu sistemụ glacial gbasasịa ebe niile nke oyi na oyi. Nke mbụ bụ glasia na Scandinavia nke gbatịrị ndịda na ọwụwa anyanwụ n'akụkụ ugwu Germany na ọdịda anyanwụ Russia. Ọ rutere agwaetiti Britain, n'ihi ya ị pụrụ ichetụ n'otú mmiri ahụ kpụkọrọ akpụkọ hà.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụkwa nnukwu mmiri glacier dị n'akụkụ niile nke Siberia. Ọzọ glacial usoro gbasara esi Canada nye United States. Niile usoro igwe a, mgbe oghachara ume ha na nguzobe ha, ha bidoro usoro ichoro ndi anyi puru ihu taata n’ebe ndia niile.
Ihe oriri, osisi na osisi
Dị ka ị nwere ike ịkọ, mpaghara Arctic na Antarctic juputara na ice, dịkwa ka ọtụtụ ugwu gbara gburugburu ụwa. Igwe mmiri snow dara ruo ọkwa a na-ahụtụbeghị taa. Dịka m kwuru na mbụ, a ga-ahụ omume niile nke glaciers na agbaze ha na-esote taa n'ọtụtụ akụkụ ụwa.
Ọbụghị naanị na enwere otu glaciation n'oge Pleistocene, mana enwere isii. N’etiti onye ọ bụla n’ime ha, e nwere oge ebe ihu igwe na-adịtụ ọkụ ma ice kpụkọrọ ọzọ. N'oge a, a na-ahụta anyị na otu n'ime oge "ezumike" ndị ahụ glacial.
Banyere ohia na umu anumanu ndi kwesiri imeghari na ebe oyi zuru oke, anyi huru mammoth, reindeer, nnukwu ele na polar bea. Ahịhịa na mpaghara dị iche iche mejupụtara ahịhịa dị n'akụkụ ebe a. Ọ dị nnọọ ka tundra dị ugbu a. Na mpaghara nkebi, nwee ọnọdụ dị elu karịa na ịrị elu nke ice anaghị ekpuchi, ha nwere ike ibi ịnyịnya, feline ndị nwere nnukwu ezé na rhino.
Umu anumanu ole na ole ndi ozo emegoro nke oma ka ha gbanwee ogologo oge. Anyị na-ekwu maka bison, elk, fox na wildcat. N'ebe oyi na-atụkarị nke North America, ụdị ndị dị ka kamel, yak, llama, tapir na ịnyịnya. Ka ọ na-erule oge Pleistocene gwụrụ, ụdị anụmanụ dị ukwuu dị ka mastodon, agu a ma ama nke nwere saber, na nnukwu mgbada anọrọlarị na ụwa niile.
Ntughari mmadu na nke ndi mmadu
Ugbu a, anyị na-ekwu maka mgbanwe mmadụ nke anyị nwere Paleolithic na Pleistocene, ebe Homo habilis malitere ichikota na ichu nta. Mgbe e mesịrị, Homo erectus mere ụfọdụ ndị ọzọ ọkaibe na ngwá agha na-achụ nta ke otu. homo neanderthalensis ọ bụ ụdị na-emegharị maka oyi na-apụta 230.000 afọ gara aga.
Anyị na-aga ịkọwa oge kachasị ọhụrụ na Quaternary: Holocene. Ọ bụ ebe anyị nọ taa. Ọ malitere afọ 12.000 gara aga na njem ya nke mgbanwe nke okpomọkụ malitere oge ọgbụgba na mbara ụwa niile. Nke a gbazee mere ka ịrị elu na oke osimiri site na mita iri atọ. A na-ekwu na oge ọgbụgba ndụ a nwere ike ịkwụsị n'oge ọhụụ ọhụrụ.
N'ime afọ 12.000 ndị a, mkpochapụ ka na-aga n'ihu ma na-emewanye ngwa ngwa karịa afọ 100 gara aga site na ọnụnọ mmadụ na mmepe nke teknụzụ. N’elu ụwa, ekpochapu oke mbibi ise. Maka nke a, akpọrọ ogbugbu ọ na-eme taa mbibi nke isii.
Ndụ nomadic nke mmadụ kwụsịrị na mmepe nke ọrụ ugbo na anụ ụlọ. Ishingkụ azụ gbasakwara mmepe mmadụ nke ukwuu. N'ikpeazụ, a na-amụkarị Holocene ruo mgbe e mepụtara edemede, ebe a na-amalite ịmụ ihe anyị na-akpọ History.
Enwere m olile anya na post a emeela ka ị marakwuo banyere oge ikpeazụ nke Earthwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Quaternary
Ana m ekele gị nke ukwuu iji ghọta ọbụna ịdị adị anyị, nlanarị na otu esi etinye aka na nlekọta nke ọdịdị yana njikọta na teknụzụ na mmepe mmadụ.
Zaghachi julio salmean sierra
The Panspermia theory gịnị bụ mbido ndụ?